Statin'ny Marketing 2014 avy amin'ny Salesforce Marketing Cloud | Martech Zone
Statin'ny Marketing 2014 avy amin'ny Salesforce Marketing Cloud
Talata, Desambra 23, 2014 Alatsinainy Desambra 29, 2014 Douglas Karr
Angamba iray amin'ireo fisongadinana lehibe indrindra nivoaka tamin'ny 2014 ny fanombohan'ny orinasa mijery akaiky kokoa ny dian'ny mpanjifa. Ahoana ny fahitan'ny vokatrao an-tserasera? Ahoana no hitarihanao ny vinavinan'ny fahitana hatramin'ny fiovampo? Ary mbola zava-dehibe kokoa aza, inona no ataonao mba hitazomana anao hihazona sy hanangana fifandraisana sarobidy kokoa amin'ireo mpanjifanao?
Hitan'ny Salesforce Marketing Cloud fa ny 86% amin'ireo mpivarotra ambaratonga ambony dia manaiky fa ilaina ny fananana dia lavitra ho an'ny mpanjifa nefa ny 29% amin'ireo orinasam-pandraharahana ihany no tena mahomby amin'ny famoronana io dia io. Banga be izany! Ary mino aho fa misy ny teknolojia sy ny enti-miasa manarona an'izay niely. Mbola eo am-panomanana andiam-pandraharahana sy hampiroborobo ny ezaka amin'ny varotra izahay hanaraka ny fitakian'ny ekipa mpivarotra fa tsy ny hampiditra loharanon-karena amin'ny paikady bebe kokoa.
Mbola ratsy kokoa noho izany, misy ny tsy fahampiana Analytics talenta eo amin'ny sehatry ny indostria ary tsy fisian'ny fifandraisan'ny marketing amin'ny lafiny hafa amin'ny fikambanana izay manohana ny varotra - toy ny serivisy ho an'ny mpanjifa na ny fampandrosoana ny vokatra. Raha tanora mpivarotra aho androany, dia handany ny ankamaroan'ny fotoanako amin'ny fanampiana handresy ny fananganana paikady marketing azo ampiasaina ary hampiasa vahaolana hitaterana tsara ireo paikady ireo.
Rehefa nanjary nazava kokoa ny dia nataon'ny mpanjifa, dia samy manana ny fiantraikany amin'io dia io sy ny fandrefesana ny dia lavitra kokoa noho ny fantsom-pivarotana tsotra!
Ity infographic ity dia misarika fisongadinana mahagaga hafa avy amin'ny fikarohana Salesforce Marketing Cloud's 2014. Salesforce dia hamoaka ny tatitry ny State of Marketing 2015 amin'ny volana Janoary.
Tags: Analyticscmofiaraha-miasa fitaovanafitantanana votoatycrm fitaovanaMpanjanantanySerivisy ho an'ny mpanjifaDatamailaka MarketingRindrambaiko momba ny fandrindrana loharanon-karena orinasaERPrindrambaiko erpfampifanarahana anatyanalytics momba ny varotraautomation marketingmailaka findayfaharanitan-tsaina mialohafidiram-bola isaky ny kitihorahona marketing ho an'ny mpivarotrafitaovana fihainoana ara-tsosialyfitaovana fanontana ara-tsosialy
Ajanony ny fitenenana fa mihena ny vanim-potoanan'ny fifantohana, TSY IZANY!
Iza no mpitsara ny varotrao?
Dec 29, 2014 amin'ny 11: 22 AM
Mahavariana fa na any amin'ireo orinasa lehibe indrindra aza, 29% amin'ireo mpivarotra ihany no mahatsapa fa mitantana ny dian'ny mpanjifa amin'ny fomba mahomby. Toa izao no tokony hifantohan'ny orinasa amin'ny 2015…